Haasaawaha shukaansi ee Miyiga iyo Magaalada ka jira | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka April 6, 2016	0 1,559 Views
Muqdisho, Soomaaliya (HIMILONEWS) – Hadal-furnaanta ka timaada qof –isaga oo doonaya inuu ku abuuro farxad iyo xiriir dabacsan waa qeyb kamid ah halbeegga lagu cabiro haasaawaha shukaansiga.
Sida uu xusay Donatella Versace, raggu waxay dumarka ku xodxotaan hadal nugul, ereyo dabacsan iyo deymo naxariis ku dheehan tahay. Waana hubka kaliya ee raggu kusoo weeraraan haweenka.
Qof inaad qalbigiisa duullaan ku qabsato kaliya kuma filna. Waa inaad barataa sida loogu haasaawo shukaansiga, marka loo eego aragtida Voltaire.
Haasaawaha shukaansigu aad bay dunida ugu kala duwan tahay la fal-galkiisa. Sida laga dheehan karo weerta Gad Elmaleh oo reer Galbeed ah, waxaa jira laba hab oo asaasi ah oo ay adeegsan jireen xilliga haasaawaha shukaansi ee xodxodsiga gabdhahooda kuwaas oo kala ah: ka qosolsiiska iyo u heesidda.
Taas waa in farsamooyin lagu kala duwanaan karo ay asal u tahay haasaawaha shukaansiga si loo hiigsado yoolkiisa danbe.
Haasaawaha shukaansigu waa asalka gunta ah ee laga alkumo xiriir gaara ilaa qoys iyo wada noolaansho. Sidaas darteed, haddaanu jirin haasaawe shukaansi, qofna qofka uu calmado iskama hantiyeen haasaawe la’aan.
In-kasta oo ay dhacdo in gabari loo guuriyo inan aysan sidaas usii aqoon gareyn, hadana bulshada 80% qoysaskoodu waxay ku dhismeen haasaawe shukaansi oo soo dhex-maray labada lamaane ee is-doortay. May dhacdeen in la yiraahdo guur baa dhaqan-gal noqday haasaawe shukaansi la’aantiis.
Waqtiga haasaawaha, dhinac kale marka laga eego, wuxuu ka dhignaan karaa ammin lagu gorfeeyo mushkiladaha si laab-furan ah iyo gun-dhigista xeer hoosaad qalbi samaan lagu guddoomay si kaftan u badan iyo maadeys u badan oo lagu waajaho waxa la filayo qabashadiisa.
Haasaawaha shukaansigu wuxuu hadba gabbalku ugu soo dhacay isaga oo marxalad ku sugan. Waagii hore oo noloshu koobneyd—dadkuna miyiga badi kuwada dhaqnaan jireen, haasaawuhu wuxuu ku sargo’naa hadba horumarka xilligaas la marayo.
Maanta oo miyi iyo magaalaba ay isku mid ka noqdeen dhanka war-isgaarsiinta, maxa iska badalay haasaawaha miyi iyo magaalo? Maxayse ku kala duwan yihiin haasaawaha miyiga iyo kan magaalada?
Hadal ku maawelinta sheekada ayaa lagu magacaabaa Haasaawe. U qabashada hadal iyo sheeko dabacsan qof ayaa iyadna ah haasaawin.
Haasaawuhu wuxuu caadiyanba ku dhashaa waqti furan iyo hadal hufan oo dhex mari kara laba qof iyo wax ka badan. Marka dib loo guda-galo halsamida erey-bixineed ee haasaawe, waxaa lagu macneyn karaa xiiso u dhaxeeya da’yarta iyo xaal waayeelladu isla gorfeeyaan.
Da’yartu inay waqti dheer haasaawe galaan waxaa ugu mudan xiisaha kalgacalka leh ee dhex-mara. Tani waxaa ka dhasha waxa afka magaaleed lagu yiraahdo Shukaansi iyo afka miyinimana oo lagu magacaabo Dhadeysi.
Shukaansigu ama xodxodashadu waa kula hadlidda qof dumar ah oo la jecel yahay ama guur laga doonayo ereyo soo jiida oo saameys weyn leh oo lagula koodo ilaa ay u beer-dulucdo weerahaada. Wuxuu ereygani gaar badi ku yahay magaalooyinka.
Xaga miyiga, shukaansigu wuxuu leeyahay magac kale iyo micno kale oo aad uga duwan midka ka jira magaalooyinka. Erey ahaan waa dhadeysi oo inta badan ka dhignaan kara usoo caraabidda iyo usoo guureynta gabar jeeskeedu meel fog ay kaa degan yihiin si aad usoo xodxodato.
Runtii tani aad bay u adag tahay socdaal ahaan. Hadana ma dhacdo inta badan in gabadhii aad usoo socdaashay ay u darbanaato shukaansigaada. Waxaa dhacda in rag kale ay kaaga soo hormaraan ardaageeda. Waana lama huraan adiga oo aan caroon inaad sugaalka ku jirto ilaa ay toogtaada ku timaado. Marar xittaa waxaa dhacda aad ku timaado gabadhii oo maqan, huruday ama xanuunsan. Halka ay timaado in gabadhii aad fogaan dheer usoo goysay ay kugu tiraahdo ereyo aan kugu habbooneyn ama aadan jecleysan sida: “cawada kuuma darbaneyne, iska dibbo.”
La-qabsiga noloshan adag, ragga ku nool miyiga tani waxay uga dhigan tahay sheeko aad u fudud la qabsigeeda. Balse si walba oo ay tahayba, tani waa xaalad ku dhalatay hab nololeedka miyiga. Waana u huriweyto.
Hadaba, haasaawe sidee ah ayaa maanta lagu kala nool yahay miyi iyo magaalaba is-badal ahaan?
Previous: Majirtaa madal ay u helaan gaadiidleydu canshuuraha ay sida maalin-laha ah u bixiyaan?
Next: Faa’iidada laga helo cunista Qaraha
Wax ka baro umadaha ugu isir ku faanka badan caalamka.
Sinnaantii Dhagta Dhiiga loo daray – Simiddii Ragga iyo Dumarka ee uu Dhiigu ku daatay.